AMISOM oo ciidan dheeraad ah u diyaarisay Doorashooyinka Soomaaliya. | XAL DOON
Home NEWS AMISOM oo ciidan dheeraad ah u diyaarisay Doorashooyinka Soomaaliya.
AMISOM oo ciidan dheeraad ah u diyaarisay Doorashooyinka Soomaaliya.
Midowga Afrika ayaa ciidan gaar ah oo Booliis ah u diyaariyay ilaalinta goobaha ay ka dhacayaan doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya oo ah halka ugu badan ee uu ka dhaco is qabqabsiga Musharixiinta iyo Beelaha.
AMISOM ayaa diyaarisay saraakiil gaar ah oo laga dhex xulay Booliiskooda kuwaas oo muddooyinkii dambe tababar lagu siinayay mid kamid ah xeryaha ay ka talo qaataan.
Sarkaal katirsan Ciidanka AMISOM ayaa sheegay in ay ku guuleysteen wada shaqeynta Ciidamada Soomaalida marka la eego qabsoomidda Doorashooyinka Aqalka Sare ee lagu kala qabtay Kismaayo, Dhuusamareeb iyo Baydhabo.
AMISOM waxa ay tababar gaar ah siisay Saraakiil Booliis oo ay kasoo dhex xulatay Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada si ay ugala shaqeeyaan amniga goobaha doorashooyinka loo qorsheeyay.
Howlgalka AMISOM ayaa 24-kii July 2021 soo bandhigay 23-sarkaal oo mas’uul uga ah arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya isla markaana la siiyay tababaro ku filan.
Saraakiisha waxa ay waaya-aragnimo u leeyihiin ilaalinta goobaha Doorashooyinka, la shaqeynta guddiga doorashada maamulaya, musharixiinta iyo isku xirka guud xubnaha ay shaqo wadaagga yihiin.
Taliyaha Booliiska AMISOM Augustine Magnus Kailie ayaa ciidamadaan ka codsaday in ay ilaaliyaan sharafta Midowga Afrika iyo tan Dalalka ay ka socdaan oo ay ku metalaan howlgalka AU.
Waa fursad AMISOM ay ku muujin karto awooddooda si ay u helaan fursad waqti dheer loogu siiyo in ay sii joogaan Soomaaliya ilaa 2027-ka, balse waa arrin ku xiran kartidooda iyo sida ay uga dhalaalaan mas’uuliyadda doorashada.